Isispanish ividiyo incoko, apho abantu bathethe isispanish, unxibelelwano kunye Dating Zonke ividiyo iincoko ngomhla omnye kwisiza
Ukuze badibane umntu omtsha, kwaye awuyazi yena ubuqu. Uyakwazi nje sebenzisa kujike ethandwa kakhulu inkonzo ngokuba ividiyo incoko. Usebenzisa i-Spanish ividiyo incoko, uyakwazi ukufumana abahlobo kwi-Sunny Iberian Peninsula. Abaninzi kulutsha zama ukufumana phandle into messaging kakhulu ethandwa kakhulu ehlabathini kwi-Spanish. Lo mbuzo ngu ngokupheleleyo isonjululwe kwi-zaziswe icebo. Nazi yesebe eqokelelweyo kakhulu watyelela ividiyo iincoko ehlabathini. Umbulelo kubo uyakwazi ukufumana abahlobo ukuba uza kukwazi ukuthetha kwi umdla izihloko. Ngaphezu koko, ukhetha esabelana ukuba zithungelana. Enjalo casual acquaintance inikezela isispanish roulette ividiyo incoko. Kubalulekile ngokupheleleyo ongaziwayo, ngenxa yokuba portal ayisayi kuba nkqu ukubhalisa. Le nkonzo ifumaneka ingakumbi ethandwa kakhulu phakathi kulutsha. Apha kukho enye kuphela disadvantage: kubalulekile enqwenelekayo ukwazi isispanish ulwimi. Kwaye ukuba lowo sele uyazi, ngoko ke kufuneka ingabi worry kakhulu: kubalulekile ngokwaneleyo ukulithabathela kuthi i-ngamazwe isingesi. Ngaphandle Dating, isispanish incoko iye abanye ngakumbi okuninzi.
Kuyenzeka hayi nkqu kuhlangana, ukuba kokufunyenwe isini, ubudala okanye imbonakalo. Ukufumana companion, nje ucofe iqhosha kwaye yiya kwindawo elandelayo umgqatswa. Kule indlela kubekho inkqubela unako ukufumana acquainted angeliso umdla guy ukusuka kwi-Spain (ukuba ufuna incoko France uza apha).
Kanye kanye kunye guy unako khetha companion
Kwaye okwesibini, awufuni inkunkuma ixesha bafumane ixesha umbhalo unxibelelwano. Kuya kwenzeka ntoni kwi-real ixesha, kwaye ngale nkonzo musa kufuneka uhlawule nawuphi na umrhumo imali. Esi-Spanish incoko ngu absolutely akukho obligation.
Akekho imeko personal acquaintance
Esi sigqibo kufuneka mutual kwaye unako kuphela kwenzeka kule nkqubo unxibelelwano. Ividiyo incoko ikunceda ukuba ngokukhawuleza balungiselele ntlanganiso. Kanye kanye kunye gqiba unxibelelwano unako noba umntu nangaliphi na ixesha. Ngenxa yokuba macala ingaba iselwa ezahlukeneyo: mnandi kwaye arrogant, rude kwaye ukuba neentloni. Kodwa kufuneka iqwalasele omnye umba obaluleke kakhulu into: kufuneka ilungiselelwe incoko. Kuqala siya kufuneka yenze isigqibo loluphi ulwimi ngcono zithungelana. Kwaye ke ndiya kuba buza umbuzo: ngubani interlocutor, apho, yintoni yakhe imisetyenzana yokuzonwabisa. Kubalulekile ukuqonda ukuba yintoni injongo unqwenela ukuqala Dating. Nkqu ukuba ufaka isispanish incoko ikhangela umphefumlo wakho mate, ukuba lawula. Akuvumelekanga kuphela unganqakraza Elandelayo iqhosha, kwaye yakho correspondent zibe ojika ngaphandle. Ngoko ke, ngexesha incoko, kufuneka enze isigqibo ngokukhawuleza
← Incoko roulette ngaphandle ngokukhawuleza umdlali Umyinge zephondo kwesi sihloko